Amanqaku kaGrace Carter Martech Zone |
Amanqaku ngu UGrace Carter
UGrace Carter ngumbhali wezobuchwephesha Academized kwaye Uncedo lwase-Australia iinkonzo. Usebenza ekuphuculeni ukuguqula kwaye avelise amaqhinga okuthengisa. Kwakhona, uGrace ngumhlohli e Uncedo lweeNgqondo zeNzululwazi iwebhusayithi yezemfundo.
NgoLwesine, Julayi 19, 2018 NgoLwesithathu, Julayi 18, 2018 UGrace Carter
Ngokwenza umxholo wabantu abafumana umdla kwaye kufanelekile, unokukhulisa ukubonakala kwendawo yakho kwiziphumo zophando zikaGoogle. Ukwenza oko kuya kunceda ukuseta ukutshintsha okuthile. Kodwa ukwenza abantu bajonge izinto zakho akuqinisekisi ukuba bathatha inyathelo kwaye bakunike uguquko. Landela ezi ngcebiso zisixhenxe ze-ecommerce zokwenza umxholo oguqukayo. Yazi umThengi wakho Ukwenza umxholo oguqukayo kuya kufuneka ukuba ube nombono olungileyo wento yakho